LINDA BROWN ONYE GUSIRI AKWUKWO NA UNITED STATES NWURU
Home cherry gold casino no deposit bonus codes the casino
Linda Brown, bụ onye nọ n’agbata afọ 1950 nke ụlọikpe ụlọikpe nke na-eduga ná mkpesa nke ụlọ akwụkwọ ọha na eze nke United States, nwụrụ na Monday, nzukọ ahụ na-ebute ụzọ iwu iwu kwadoro.
Ụlọikpe Kasị Elu United States na-ekpe ikpe na Brown v. Board of Education case in 1954 bụ oge dị mkpa n’ime njem ahụ iji kwụsị ịkpa ókè gbasara ịkpa ókè megide ụmụ nwoke ojii na United States, ma ịkpa ókè, ịkpa ókè agbụrụ na esemokwu agbụrụ na-eti mba ahụ ihe karịrị 60 afọ mgbe e mesịrị.
ABUJA AIRPORT NA-ENWETA AKARA NGOZI UGBO ELU MBA KACHA MMA
“Linda Brown, onye bụ otu n’ime ụmụ akwụkwọ na-eto eto nke dị na Brown, ikpe nke Board of Education, agafeela taa mgbe ọ dị afọ 76,” ka nkwupụta nke National Association for the Advancement of Colored People Legal Legal and Educational kwuru. Ego (LDF).
Brown “bụ otu n’ime ìgwè ndị pụrụ iche nke ndị na-eto eto nwere obi ike, bụ ndị, ya na ndị ezinụlọ ya, ji obi ike lụọ ọgụ iji gosipụta ihe nnọchianya kachasị elu nke oke ọcha – agbụrụ dị iche iche na ụlọ akwụkwọ ọha na eze,” onyeisi oche LDF bụ Sherrilyn Ifill kwuru.
“Ọ na – eguzoro dịka ihe atụ nke ụmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ nkịtị na – ewere ọnọdụ ime obodo n’ịgbanwe mba a,” ka o kwuru.
“Ọ dịghịrị ya ma ọ bụ ezinụlọ ya mfe, ma àjà ya mebiri ihe mgbochi ma gbanwee ihe nha anya na mba a.”
Mgbe NAACP kwuru Brown bụ 76 mgbe ọ nwụrụ, afọ ole ọ bụla nọ na-akọ na ọ dị 75.
Nzukọ ahụ enyeghị nkọwa banyere ihe mere ya ji nwụọ.
Ná mmalite afọ 1950, Oliver Brown gbara mbọ idebanye nwa ya nwanyị n’ụlọ akwụkwọ niile na-acha ọcha na nso ụlọ nke ezinụlọ ya na Topeka, Kansas, ma a gwara ya na ya ga-aga ụlọ akwụkwọ ojii niile dịpụrụ adịpụ.
Brown wee laghachi n’ụlọ ikpe maka ikpe ziri ezi na ikpe nke bụ akụkụ nke nnọchibido iwu nke NAACP.
E jikọtara ikpe ahụ Kansas na ndị ọzọ site na Delaware, South Carolina na Virginia nakwa isi obodo, Washington, mgbe a na-akpọ ha n’Ụlọikpe Kasị Elu nke United States, na-abanye Board of Education.
– ‘Mmetụta dị ịrịba ama’ –
Na May 17, 1954, Ụlọikpe Kasị Elu kpebiri na otu nnọpụiche bụ nkwenkwe.
Ma nnọpụiche dị nnọọ anya n’agbanyeghị ikpe ikpe ụlọikpe, ụfọdụ ndị na-acha ọcha na-emegidekwa ha.
President Dwight D. Eisenhower depụtara ndị agha Amerịka mgbe Arkansas gọọmenti gbochire ụmụ akwụkwọ America na America ka ha bụrụ ndị ụlọ akwụkwọ sekọndrị nile na isi obodo Little Rock na 1957.
N’agbanyegh i na iwu ezighi ezi na ulo akwukwo mgbe ochichi ochichi Brown no, enwere nkea gara n’ihu n’ihi mmegide sitere n’aka ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu di iche iche nakwa n’ihi ebe ndi mmadu di iche iche na oji di iche iche di iche iche, nke mere ka ha di iche iche n’ulo akwukwo.
BBNAIJA: ANTO NA KHLOE NWETA OHERE OZO
A na – agbazi ụmụ akwụkwọ si n’ógbè ha dị n’ụlọ ruo n’ụlọ akwụkwọ na mpaghara ndị ọzọ iji dozie ọnọdụ ahụ, mana ọ ka na-aga n’ihu na ihe karịrị afọ 20 mgbe Brown v. Board.
Ọ bụghị nanị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na America: e nwekwara ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche, ime ụlọ ịwụ ahụ na isi iyi mmiri maka ndị ojii na ndị ọcha na mpaghara nke mba – ụfọdụ ndị na-eme mkpesa na-edozi oche iji kweta dị ka akụkụ nke ikike ndị obodo.
Ọbụna ugbu a, esemokwu nke agbụrụ na-anọgide na-emeri America – ebe ndị ojii nọ na-eche ihu ọtụtụ narị afọ nke ịkpa ókè na ịgba ohu – na ndị Africa-America ka na-eme ka pasent nke ndị mkpọrọ na ndị ogbenye na-enweghị atụ.
Brown, bụ nwa agbọghọ mgbe ikpe ikpe ahụ malitere, ghọrọ onye nkụzi ụlọ akwụkwọ n’oge na-adịghị anya, kụziiri nkuzi piano ma rụọ ọrụ na Brown Foundation, otu nzukọ na-achọ ịkwalite ihe ndekọ nke ikpe ahụ, dị ka ebe nrụọrụ weebụ ya si dị.
Kansas Gọvanọ Jeff Colyer nyere ya ụtụ na Twitter post na Monday.
NAFDAC DORO AKA NA NTI MEGIDE MKPURU OSISI CHARA ACHA
“Ndụ Linda Brown na-echetara anyị na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-adịghị ele anya nwere ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na na site n’ijere obodo anyị ozi, anyị nwere ike ịgbanwe ụwa kpamkpam,” ka Colyer dere.
Ndi otu ndi otu ndi otu mba di iche iche nke United States na-ekwuputa uto nke ikpe ikpe.
“Mkpebi Brown mere ka America bụrụ ihe mgbaru ọsọ nke olileanya maka ndị ọzọ nke ụwa; ọ kụziiri anyị na anyị nwere ike, site n’usoro iwu, kwụsị ụdị mmegbu na usoro ịgba chaa chaa, “ka otu ahụ kwuru na Twitter.
“Taa, anyị na-asọpụrụ Linda Brown na ọgụ niile anyị hapụrụ iji merie.”
Tags: brownIsimbidoisimbido newsISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVlindalindabrownneewsposts
IGBAJI: NWUNYE NELSON MANDELA, WINNIE MANDELA NWURU 81